Iindlela ezihlaziyiweyo zokuthengisa kwi-Intanethi | Martech Zone
Ukuba ubungazange uve, iAmazon ivula inethiwekhi enkulu ye iivenkile ezivelelayo Kwiivenkile ezinkulu zaseMelika, ezineevenkile ezingama-21 ezikumazwe ali-12 esele zivulekile. Amandla okuthengisa ayaqhubeka nokutsala abathengi. Ngelixa abathengi abaninzi bexhamla kwizivumelwano ezikwi-Intanethi, ukufumana imveliso emntwini kusenzima kubathengi. Ngapha koko i-25% yabantu bayathenga emva kokhangelo lwasekhaya nge-18% yezi zinto zenziwe ngaphakathi kosuku olu-1
I-Intanethi iyitshintshile indlela amashishini asebenza ngayo kunye nevenkile yabathengi ngonaphakade. Ukusuka kwizinto ezilula njengabathengi abafuna inombolo yefowuni yevenkile ekwi-intanethi kuphuhliso lwe-Intanethi yeZinto (i-IOT) -indawo yokuthengisa itshintshe kakhulu. Kubalulekile ukuba abathengisi baqhubeke okanye babeke emngciphekweni wokushiyeka ngasemva. Storetraffic.com
Le infographic evela kugcino lwezithuthi inikezela umfanekiso wendlela i-Intanethi enayo kwaye iya kuqhubeka nokudlala umqulu kumava okuthenga. Iziseko zibandakanya ukuqinisekisa indawo yakho yeshishini echanekileyo, inombolo yefowuni, kunye neeyure zivela kukhangelo kunye noluhlu lwezikhombisi. Amanyathelo alandelayo kukuqinisekisa ukuba ishishini lakho liyavela apho abantu bafuna iimveliso zakho- njengakwincoko yemidiya yoluntu.
Kwaye okokugqibela, sisakhono sokunxibelelana ngokuthe ngqo kunye nabathengi bakho ngezixhobo zeselfowuni kunye neze-IoT. Umzekelo omnye endiqhubeka nokuwusebenzisa buqu Inkqubo yeselfowuni. Njengoko ndiqhuba, iapps yeselfowuni ihlala indazisa ngesithembiso okanye isaphulelo kumthengisi okufuphi.
The Imeko ye-Intanethi yeZinto Isifundo esivela kwiAccenture Interactive sifumanise ukuba phantse isibini kwisithathu sabathengi sinenjongo yokuthenga isixhobo esixhunyiwe ekhaya ngowama-2019, ngelixa ubunini beteknoloji enxitywayo kulindeleke ukuba iphindaphindwe unyaka kunyaka ka-2016. Iindawo ezintathu:
Amava oMthengi -Abathengi basebenzisa ii-smartphone zabo okanye izixhobo ezinokunxitywa ukuskena ngokukhawuleza into kwaye babize ulwazi ngemveliso, uphononongo okanye amagqabantshintshi eendaba kwezentlalo. Abathengi bafumana amakhuphoni edijithali enziwe xa bengena evenkileni. Abathengi basebenzisa iirobhothi ezinezikrini zokuchukumisa ukukhangela kuluhlu olunokukhokelela abathengi kwiimveliso ezinqwenelekayo.
Itsheyini yonikezo - Iishelufa ezifanelekileyo kwivenkile ezibhaqa xa uluhlu lwempahla luphantsi. Iirobhothi ezinobuchule ezisebenza ngokuzimeleyo ziya kunceda kwiindawo ezisusela ekubuyiseni isitokhwe ukuya kwindibano yemveliso ukuya ekuphatheni izinto eziyingozi. Ukupakishwa okufanelekileyo okujonga ukutsha okanye ubudala beempahla ezinokutsha.
Amajelo amatsha kunye nemijelo yeNgeniso- Iimpawu zexabiso ze-Smart ezinokutshintshwa ngexesha lokwenyani ngokusekwe kwimfuno okanye ezinye iindlela. Nge-pantry eqhagamshelwe, ukutya okusisiseko kufika xa kufuneka njalo. Iingcebiso zokupheka ezisekwe kwizithako ezikhoyo ekhaya. Ngezixhobo eziDibeneyo zokuThuthuka kweKhaya, ukuseta okuzenzekelayo / ukubeka esweni okude iqondo lobushushu, ukukhanya.
tags: AccentureIvenkile ye-eintanethi izintoyasebukhosi-isitshixo seringiusetyenziso lwesitshixousetyenziso lweselulaukuthengisa ngaphandle kweintanethiIvenkileIngeniso yokuthengisaivenkile yezithuthiyogcinoitsheyini yonikezo